Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Jimce Ah 17 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Jimce Ah 17 June
June 17, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Arsenal ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto weerar yahanka Manchester City iyo Brazil Gabriel Jesus, oo 25 jir ah.
Tottenham ayaa isku diyaarinaysa 90 milyan oo euro (£77m) oo ay ku doonayso weerar yahanka Inter Milan Lautaro Martinez laakiin 24 jirka reer Argentina ayaa doonaya in uu sii joogo kooxda Serie A ka dhisan ee aan wax niyad ah u hayn in ay iska iibiyaan. Alfredo Pedulla
Newcastle United ayaa isha ku haysa goolhayaha reer England ee Burnley Nick Pope oo 30 jir ah. Mail
Liverpool ayaa weli xiiseyneysa 18-jirka Borussia Dortmund iyo xulka England Jude Bellingham. Mirror
AC Milan ayaa noqotay kooxda ugu cadcad ee ka horaysa Newcastle saxiixa daafaca 21 jirada Lille ee Sven Botman. Insider
Manchester City ayaa isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso daafaca bidix ee Brighton iyo Spain Marc Cucurella oo 23 jir ah. Guardian
Tababaraha kooxda Nottingham Forest Steve Cooper oo kooxda ku hogaamiyay u soo dalacsiinta Premier League xilli ciyaareedkii hore ayaa ku dhaw in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda. Telegraph
Forest ayaa sidoo kale wadahadalo kula jirta 26 jirka daafaca dhexe ee France Moussa Niakhat oo ka tirsan kooxda Jarmalka ee Mainz. Mail
Leeds United iyo Southampton ayaa xiiseynaya 18-jirka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Romeo Lavia. Athletic – subscription required
Southampton ayaa qarka u saaran inay ku dhawaaqdo saxiixa goolhayaha Republic of Ireland Gavin Bazunu, oo 20 jir ah, kana yimid Manchester City heshiis ku kacaya 15 milyan ginni. Telegraph
Fulham iyo Wolves ayaa labaduba xiiseynaya saxiixa khadka dhexe ee Sporting Lisbon iyo Portugal Joao Palhinha, 26. 90min
Madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa sheegay in saxiixa cusub ee Manchester City Erling Haaland, oo 21 jir ah, uusan ku bilaaban laheyn hadii uu weeraryahanka u dhaqaaqi lahaa dhanka Isbaanishka. Mirror
Daafaca reer England James Tarkowski, oo 29 jir ah, ayaa ogolaaday inuu ku biiro Everton marka uu dhaco qandaraaskiisa haatan ee Burnley xagaagan. Sky Sports
Juventus ayaa badashay dalabkii ay ku doonaysay xiddiga garabka uga ciyaara xulka qaranka Argentina ee Angel di Maria kaas oo beeca xorta ah ku heli kara ka dib markii uu ka tagay Paris St-Germain iyada oo Barcelona kula tartamaysa saxiixa 34 jirkan. Gianluca di Marzio
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee France Aurelien Tchouameni ayaa u dhaqaaqay Real Madrid isagoo ka yimid Monaco ka dib markii 22 jirkaan uu diiday mushaar sare oo uu ka qaadan jiray PSG. Marca